waxwalba waxay leeyihiin bilaw iyo dhamaad. - Amjambo Africa
waxwalba waxay leeyihiin bilaw iyo dhamaad.
Xilli aduunku inta badan aamusanyahay marka laga hadlayo xasuuqa joogtada ah ee ka socda South Sudan, Syria, Republic of Central Africa, Somalia, kaliya in la xuso in yar, Dr. Gregory H. Stanton, madaxweynihii aasaasay iyo gudoomiyaha Genocide Watch, wuxuu bixiyay muxaadaro ku saabsan Sebtember 26 oo cinwaankeedu ahaa, \_”Dadka aan la rabin iyo Xuduudaha Halganka Jinsiyadda Rohingya, Banyamulenge, iyo Kuwa Kale.\_” Wuxuu adeegsaday kiisaska Rohingya.
Rohingya iyo Banyamulenge labaduba waa qabiilooyinka laga tirada badan yahay, kana kala yimid Myanmar iyo DR Congo, siday u kala horreeyaan. Labadaba waxaa bartilmaameedsaday qabiilooyinka kale ee dalalkooda ku nool waxayna la kulmeen takoor nidaamsan. Labadooduba hadda waxay wajahayaan in laga saaro dalalkooda, iyo suuragalnimada in la baabi’iyo. Magaalada Minembwe, Bariga Koongo, in ka badan 150,000 Banyamulenge ayaa ka qaxay tuulooyin, kuwaas oo lagu gubay dhulka.
Labadooduba hadda waxay wajahayaan in laga saaro dalalkooda, iyo suuragalnimada in la baabi’iyo. Magaalada Minembwe, Bariga Koongo, in ka badan 150,000 Banyamulenge ayaa ka qaxay tuulooyin, kuwaas oo lagu gubay dhulka. Dadkan barakacayaasha ah ayaa hadda ku nool xeryo, iyaga oo aan helin gargaar sababtoo ah la’aanta gargaar bani’aadamnimo oo ku filan. Tani waxay sidoo kale la mid tahay boqolaal kun oo Rohingya ah, oo ka qaxay guryahoodii kuna nool xaalad aad u xun Bangladesh. Dr. Stanton wuxuu sheegay in kiisaska Rohingya iyo.
Dr. Stanton wuxuu dadka ku booriyay inay feejignaadaan, dawladahana ku cadaadiyaan inay soo faragaliyaan markay gartaan in talaabooyin loo qaadayo xasuuqa. Marxalad kasta waxaa jira tallaabooyin ka hortag ah oo la qaadi karo si loo joojiyo xawaaraha. Horumarku ma aha mid toosan, heerarkuna si isku mid ah ayey u dhici karaan. Kuwaas waxaa ka mid ah kala sooc, astaan, takoorid, bani-aadminimo, abaabul, kala qaybin, diyaarin, cadaadis, dabargoyn, iyo diidmo Mid ka mid ah marxaladaha ugu halista badan waa bini-aadamnimada, marka koox ka mid ah dadka ay dafiraan dadnimada koox kale, xubnaha ka tirsan kooxda la takoorayna waxaa loo ekaysiiyaa xayawaanka, cayayaanka, cayayaanka, ama magacyada cudurrada. Tani waxay awood u siinaysaa gardarooyinka inay rumaystaan inay wax dilayaan.
Qiyaasta hadalada naceybka ah ee hada ku faafaya baraha bulshada ee Myanmar iyo DR Congo ee lagu bartilmaameedsanayo Rohingya iyo Banyamulenge waa aalad dacaayad xoog leh, hogaamiyaasha caalamkuna waa inay si deg deg ah oo adag u cambaareeyaan hadalka noocaas ah, oo ay maxkamad la soo taagaan maamulada iyo dadka aqoonta leh ee u ogolaada in la sii daayo, taas oo kicinaysa xasuuq. Jilayaasha xun waa in laga mamnuuco safarka caalamiga ah oo hantidooda ajaanibta ah la fariisiyo, waana in la xiraa ama la xiraa idaacadaha nacaybka ku jira, iyagoo wata nacayb nacayb.
Colaadda ka taagan DR Congo waa ay sii dheeraatay ilaa ay dadku bilaabeen in ay ka fikiraan in rajo laga qabin xalka. Qabaa’ilka Tutsi-ka sida Banyamulenge – oo ku kala yaal aagag kala duwan oo ka tirsan Kongo waxay halis ugu jiraan in la dabar jaro ama laga saaro guryahooda hooyo.
Meelaha kale ee kulul ee DR Congo waxaa ka mid ah Beni, Waqooyiga Kivu, halkaas oo boqolaal qof si arxan daro ah loogu dilay, iyo Ituri, Bariga DR Congo. Iyo Batwa – dadkii hore ee wadaniga ahaa, laakiin sidoo kale loo yaqaan Twa, oo laga helay DR Congo, Rwanda, iyo Burundi ayaa la takooray sanado badan. Waxay ku leeyihiin matalaad la’aan heer kasta oo hoggaamineed oo ah siyaasadda deegaanka, gobol, ama qaran.
Dawladdu malaha rabitaan siyaasadeed oo ay ku ilaaliso nabadgelyada iyo amniga, dalkuna waa kala qaybsan yahay, iyadoo kumanaan kun oo qof ay ku jiraan khatar weyn Q.M waxay galisay mid kamid ah howlaheeda nabad ilaalineed ee ugu waaweynaa abid muddo 17 sano ah, laakiin dad aan waxba galabsan ayaa wali ku dhinta gacanta kooxaha maleeshiyada. Kooxaha hubeysan waxay qortaan dhalinyaro ku meeraysta wadanka oo aan rajo ka qabin inay iskuul dhigtaan iyo inay shaqo helaan.
Tani waa qayb ka mid ah meertada khilaafaadka aan dhammaadka lahayn. Danaha kaladuwan ayaa ka faa’iideysta kheyraadka Congo, iyo ka ganacsiga rasaasta oo ku dhacda gacanta dad aan masuul ka aheyn ayaa sii hurisa dilka iyo kufsiga malaayiin haween ah. Masuuliyiinta dowlada ee musuqmaasuqa ku kaca ayaa hantida shacabka u adeegsada danahooda shaqsiyadeed waxayna ku fashilmaan fulinta adeegyada aasaasiga ah.
Albert Einstein mar wuxuu yiri, \_”Dunida ma baabi’in doono kuwa xumaanta sameeya, laakiin waxaa baabi’in doona kuwa iyaga daawada iyaga oo aan waxba qaban.\_” Waxaan dhamaanteen door ku leenahay geedi socodka joojinta xasuuqa adduunka. Waan awoodnaa waana inaan adeegsanaa codadkeena si aan uhadalno, uguna yeerno hogaamiyaasha inay si dhaqso leh wax uga qabtaan, kahor inta aan dad badan oo aan waxba galabsan la bartilmaameedsado oo la dilo.
Laga soo bilaabo 1996, rabshadaha ayaa sababay dhimashada in ka badan 5.4 milyan oo qof gudaha DR Congo. Laga soo bilaabo 2017, in ka badan 900,000 Rohingya ayaa laga qasbay inay ka baxaan Myanmar oo ay galaan xeryaha Bangladesh. Immisa kale ayaa qasab ah inay ku dhacaan? Beesha caalamkuna ma wax ka qaban doontaa.
PreviousWaa maxay caymisku, si kasta?